Ukubukezwa kwe-Semalt: I-Web Data Scraping Tools Engakusiza Ngempela
Siyazi ukuthi ukuhluzwa kwewebhu kuyinkimbinkimbi inqubo ehilela ukukhomba nokukhipha ulwazi kusuka kumawebhusayithi ahlukahlukene. Amabhizinisi amaningi ancike kudatha, futhi ithuluzi elilula lokubhula iwebhu lingakwazi ukuxazulula izinkinga ezihlukahlukene zedatha ezisinikeza okuqukethwe okunamandla nokuwusizo.
Izinzuzo ezibonakalayo zamathuluzi wokuhlunga iwebhu kulula ukuyisebenzisa futhi zingakhipha idatha enembile phakathi nemizuzwana embalwa. Ezinye zezinketho zikhululekile, kanti ezinye zikhokhwa - pale pink and black fascinator. Amathuluzi we-web ukuhlunga avame ukuhluka komunye nomunye ngokuya ngezici zabo, izinketho, nokuphathekayo. Abanye babo badinga amakhodi ngenkathi abanye bengakudingi ukuthi ube namakhono okuhlela.
2. Amashumi amabili
Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukukhipha idatha enkulu noma uhlele amaphrojekthi wezintambo zewebhu, u-Abenti uzokwenza imisebenzi eminingi kuwe. Ukusebenzisa leli thuluzi, ungasebenzisa imisebenzi ehlukene yokukhipha ngesikhathi esisodwa bese uvula idatha enkulu. Isinikeza imininingwane ekhishwe emafomethi we-JSON, TSV ne-CSV futhi isebenzisa ama-API ukuze iqoqe ukuqoqwa kwedatha ngolimi lohlelo olukhethile. Inguqulo yayo yamahhala inezinombolo ezilinganiselwe zokukhetha, ngakho-ke ungasebenzisa inguqulo ekhokhelwe efika nesiqinisekiso sembuyiselo semali.
i-CloudScrape ingenye ithuluzi le-web scraping lisekela iqoqo elikhulu lemininingwane futhi alidingi ukulandwa. Lolu hlelo lokusebenza olusekelwe kusiphequluli lungakwazi ukusetha kalula abakwa-crawlers bese lukhipha idatha yesikhathi sangempela kuwe. Kamuva, ungagcina idatha ekhishwe ku-Google Drayivu neBhokisi. inetha noma itholwe njenge-CSV ne-JSON.
Idathahut iyithuluzi lokukhipha idatha yedatha ye-web scalable, flexible, kanye nebhizinisi kuzo zonke izidingo zakho zedatha. Ungathola ulwazi olunembile ngamanani alinganisiwe futhi isiqinisekiso sokubuyisela imali esingu-100%. Kufanele ukhumbule ukuthi ayikho inguqulo yamahhala ka-Datahut, kodwa inguqulo yayo ye-premium isabelomali-friendly futhi ifaneleka izinkampani zokuqalisa nezinkampani ezisungulwe. Ihlanganisa idatha kusuka kumasayithi amaningi futhi iqoqa imikhiqizo, okuqukethwe, izithombe, namaphrofayela kuwe.
I-Webhouse. Io yisicelo sewebhu esinikeza ukufinyelela okuqondile nokulula kwedatha ehlelekile futhi isebenzisa ubuchwepheshe bokukhwabanisa bewebhu ukwenza imisebenzi ehlukahlukene. Ikwazi ukukhomba isayithi lakho futhi ikhishwe idatha kusuka kumakhasi ewebhu ahlukene ngezilimi ezingaphezu kuka-200. Isekela amafayela we-RSS, JSON, HTML ne-XML.
Omunye wamathuluzi wokuqamba idatha amahle yi-Fivetran. Kuyinto yokwedlulisa idatha enamandla futhi enokwethenjelwa futhi isindisa amandla nesikhathi sakho. Ngesikhathi esinikeziwe, i-Fivetran ingasuswa kumakhasi wewebhu angama-100 kuya ku-100000 ngaphandle kokukhishwa.